Getaways na ụmụaka | Akụkọ Njem
Maria | | Iso umuaka eme njem, njem
Na-eme atụmatụ ịgbapụ ezinụlọ? You ekpebibeghị ebe ịchọrọ ịga? Site na echiche anyi n’enye n’okpuru, umuaka ga anuri na nma: ogige ndi a na akwu, anumanu na akuku aquariums, dinosaurs, njem n’ime oke osimiri na polo ... Jikere ibi ndụ pụrụ iche nke ị ga-echeta n’oge ndụ gị niile dị ka nnukwu njem njem ezinụlọ nke ị nwere mmasị na ya karịa mgbe ọ bụla ọzọ.
1 Akpa ụgbọ mmiri
2 Ije ije n'etiti dinosaurs
3 Oceanogràfic nke Valencia
4 Oflọ Pippi Longstocking
5 Santalọ Ọrụ Santa Nöel
Akpa ụgbọ mmiri
Ọtụtụ ndị njem na-ahọrọ ụgbọ mmiri iji nwee ọ enjoyụ ụbọchị ole na ole maka ezumike n'ihi na ha na-enye ohere ị ga-eleta ọtụtụ ebe n'otu oge n'ụgbọ mmiri jupụtara n'ihe eji enyere ndụ aka yana ọtụtụ ihe omume ntụrụndụ. Onga njem njem ezinụlọ bụ ezigbo echiche n'ihi na ụmụntakịrị ga-enwetakwa ahụmịhe site na ịhazi ihe omume pụrụ iche maka ha, dị ka ngosi na egwuregwu.
Na mgbakwunye, imirikiti njem nwere ụmụaka n'akụkụ ebe ndị ọrụ ruru eru na-ahụ maka oge niile ka ụmụaka nọrọ n'ụlọ nchekwa maka udo nke uche na nnwere onwe maka ndị nne na nna. Mgbe ha banyere, ezinụlọ ahụ ga-enweta wristband wristband ma nwee ike ịgbazite pagers ma ọ bụ DECT igwe maka obere ụgwọ ka ndị otu ha wee nwee ike ịbịakwute ha oge niile.
Maymụaka enwere ike ghara ịla ezumike dị ka nke a mana ha ga-ebi ya dịka njem pụrụ iche pụrụ iche nke ha ga-echeta maka ndụ ha niile, ebe ọ ga-enye ha ohere ịtụgharị uche n'oké osimiri na ịma mma ya niile. a etiti na izute dị iche iche ebe onye ọzọ.
Foto | Obere njem
Ije ije n'etiti dinosaurs
Ọ bụrụ na ụmụ gị ajụọla gị etu ụwa dị ọtụtụ nde afọ gara aga, ụzọ kachasị mma iji kọwaa ya bụ ileta Dinópolis Teruel (Polígono los Plaos, S / N), ogige ntụrụndụ pụrụ iche na Europe ọkachamara na dinosaurs na kemgbe mmalite ya na 2001 dọtara ọtụtụ puku mmadụ n'ihi ekele zuru oke nke sayensị na oge ezumike.
Dinbanye Dinópolis Teruel pụtara ịlaghachi azụ n'oge tupu oge ochie. Ihe njem ahụ malitere na monta Oge njem, ebe a kọwaara anyị mmalite nke ụwa na dinosaurs site n'enyemaka nke ihe ndị dị ndụ na mmetụta pụrụ iche anyị na-agbaba n'ụzọ na ọbụna nye anyị ihe ịtụnanya. Mgbe mma Ikpeazụ nkeji gbalịa ịza ihe kpatara dinosaurs ahụ jiri pụọ n'anya na ihe mechara mechaa.
Ebe ọzọ na-adọrọ mmasị na Dinópolis Teruel bụ ụlọ ngosi ihe nka, ebe a na-egosipụta fosil nke dinosaurs na ndị ọzọ Jurassic. Njem na-akpali akpali nke anyị nwere ike ịhụ nnukwu ọkpụkpụ nke mmiri na dinosaur dị ka Tyrannosaurus Rex. N'ikwu okwu banyere ihe atụ a, T-Rex gosipụtara n'eziokwu na-agbagha ụdị ihe atụ dị oke mkpa nke ụda olu gị na-atụ gị ụjọ.
Ọnụ ego nke tiketi Dinópolis Teruel bụ euro 28 maka ndị okenye yana euro 22 maka ụmụaka na ndị ezumike nka.
Oceanogràfic nke Valencia
Valencia bụ ụlọ nwere nnukwu akwarium na Europe, Oceanogràfic nke Obodo Arts na Sayensị (Carrer d'Eduardo Primo Yúfera, 1B). N'ihi nhazi ya na akụkụ ya, yana nchịkọta ya, anyị nọ n'ihu aquarium nke a na-anọchi anya usoro okike ndị dị na mbara ala yana ụdị dịgasị iche iche dịka dolphins, akàrà, shark, ọdụm mmiri ma ọ bụ belugas na walruses na-ebikọ ọnụ., naanị ụdị nke enwere ike ịhụ na akwarium Spanish.
A na-amata ụlọ ndị mejupụtara Oceanogràfic na gburugburu mmiri ndị a: oke mmiri na oke osimiri, Mediterenian, ala mmiri, oke osimiri, Antarctic, Arctic, agwaetiti na Oke Osimiri Uhie, na mgbakwunye na dolphinarium. Ebumnuche dị n'agbata oghere a pụrụ iche bụ na ndị ọbịa na Oceanogràfic, ụmụaka na ndị okenye, mụta ezigbo njirimara nke osisi flora na fauna site na ozi nkwanye ùgwù. kwupụta nchekwa gburugburu ebe obibi. Tiketi ụmụaka na-akwụ euro 22,30 na ndị okenye 29,70 euro.
Oflọ Pippi Longstocking
Mụaka nwere ike ghara ịma akụkọ banyere pizpireta Pippi Langstrump dịka nne na nna, mana ha ga-ada ogbi mgbe ha gara n'ogige isiokwu nke na-ewetara ndụ na akụkọ nke onye edemede Astrid Lindgren, na Vimmerby na ndịda Sweden.
Aha ya bụ Astrid Lindgren's World (598 85, Vimmerby) na mpaghara nke 130.000 m2, nhazi ederede ya edeghachila n'uju. Ndị ọbịa nwere ike ịgagharị ha mgbe ha na-anụ ụtọ ihe ngosi dabere na akwụkwọ akụkọ ha, ihe odide ha na-adọrọ mmasị na ebe egwuregwu dị iche iche.
N'ime ogige ahụ, enwerekwa ebe iri nri dị iche iche, gụnyere mpaghara nke obere ụlọ na bougainvilleas na mpụga nke na-enye ebe obibi ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnọ karịa otu ụbọchị ebe a.
Ọnụahịa ịga leta Pippi Longstocking Park bụ euro 15,34 maka ndị okenye (site na 15 afọ) na euro 10,39 maka ụmụaka (n'etiti 3 na 14 afọ). Laghachi na nwata gị ma mee atụmatụ maka ụmụaka na Sweden!
Foto | Na-achọpụta Finland
Santalọ Ọrụ Santa Nöel
Ọ bụghị mmadụ niile nwere ohere ileta Fada Nöel n’ụlọ ọrụ ya (Joulumaantie 1, 96930 Rovaniemi)Yabụ echiche nke ịbụ otu n'ime ndị ahụ nwere isi ọma ga-ejupụta obere ụmụaka n'ụlọ. Operationslọ ọrụ ya dị na etiti Rovaniemi, na Finnish Lapland.
Puku kwuru puku mmadụ sitere n’akụkụ ụwa nile agaala leta Fada Nöel, onye na-azụ ya na elves, ndị na-agwa ndị ọbịa banyere ọrụ ha na ụfọdụ nzuzo nke agadi nwoke nwere omume enyi.. Na mgbakwunye, ha ga-anwete ọbịbịa ahụ na foto dị oke mma na vidiyo iji cheta ụbọchị a ebighi ebi. Ha na-emeghe kwa afọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Getaways na ụmụaka